Iverizon & apos; ii-4g izantya zihlala zikhawuleza kune-t-mobile & apos; s inethiwekhi ye-5g, kunye nomqondiso womelele
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-Verizon & apos; ii-4G izantya zihlala zikhawuleza kune-T-Mobile kunye neapos s network ye-5G, kunye nomqondiso womelele
I-Verizon & apos; ii-4G izantya zihlala zikhawuleza kune-T-Mobile kunye neapos s network ye-5G, kunye nomqondiso womelele
I-RootMetrics, inethiwekhi esebenza ngenethiwekhi yenkxaso ye-IHS, yenye yeefemu ezinkulu zophando kwihlabathi liphela, sele isinike isikhalazo sesigwebo sayo I-AT & T. , I-T-Mobile kunye ne-Sprint & apos; s Isantya kunye nengxelo yokuthembeka kwisiqingatha sokuqala sonyaka, kodwa kuyacaca ukuba igcine eyona ilungileyo yokugqibela
Kanye njengayo ufumene ibhaso lenethiwekhi ye-OpenSignal 5G kwihlabathi jikelele namhlanje, IVerizon iya ekhaya ibhaso lesizwe apha eMelika ngokunjalo. Ingalo yokuvavanywa kwenethiwekhi yeseli ye-IHS inyaniseka ukuthembeka, isantya senethiwekhi, ukusebenza kwedatha, ukusebenza komnxeba kunye nokusebenza kombhalo ngaphezulu kwekhulu leemarike eziphambili kwi-US.
Ngenxa yokutshixeka kwe-coronavirus, nangona kunjalo, ezi ziziphumo zokuqala kwiimarike ezingama-55 ezivavanyiweyo ukuza kuthi ga ngoku, endaweni yengxelo epheleleyo yonyaka, kwaye basatsho kakuhle. Ngelixa i-AT & T yayiyeyona nethiwekhi ikhawulezayo ukuphucula, kwaye i-T-Mobile yakhangela ukusebenza okuhle, nayo, yiVerizon ethatha ikhekhe kwiiMotorMetrics ngaphezulu kweyodwa.
Ukukhuphela iVerizon & apos; s ye-4G LTE kukhawuleza kune-AT & T okanye iT-Mobile kunye neapos s 5G isantya
Olona hambo luthathwe kuyo yonke imilinganiselo kubonakala ngathi nangona i-T-Mobile iqhayisa ngekhekhe layo le-5G kathathu, ukuthunyelwa kwayo ngokupheleleyo akukaze kwenzeke. Ngelixa udibaniso lwe5G oludibeneyo ePhiladelphia ngoku lusebenzisa iSprint & apos; s 2.5GHz spectrum yokugubungela indawo enkulu kunayo yonke iVerizon & apos; s mmWave 5G ukugubungela kwilizwe liphela, ii-apos zisacotha kuneVerizon kunye neapos ezilungileyo ze-LTE.
Njengokuba kunjalo, ezinye zezantya zeVerizon kwi-4G LTE zikhawuleze kunezinye izithuthi ezikhawulezayo zokukhuphela isantya kwi5G. Umzekelo, iVerizon ekhawulezayo ye4G LTE isantya sokukhuphela isantya se303.6 Mbps ePhiladelphia sakhawuleza kunaso nasiphi na esinye isantya sokukhuphela ngokukhawuleza kwi-5G.
Ukongeza kwisantya sokukhuphela esiphakathi ngokukhawuleza, kwaye ngomgama omkhulu, iVerizon ikwatshekishe ibhaso le-signal-to-noise ratio (SNR), kwaye kuyacaca ukuba ibisenza oku ukusukela ngo-2018. Le SNR iphezulu ithetha ukuba i-Big Red & apos; s abathengi bafumana umqondiso ocacileyo ngongenelelo oluncinci kunabanye abathwali.
I-Verizon vs T-Mobile vs i-AT & T yomqondiso wesandi-kwingxolo (ephezulu ingcono)
Nazi iziphumo eziphambili zeRootMetrics kwiVerizon vs AT & T vs T-Mobile 5G kunye nesantya senethiwekhi kunye nokufumaneka:
I-Verizon ihambisa isantya esiphuculiweyo kwizixeko ezingama-40 kwezingama-55: Ngelixa izantya ezikhawulezayo zaseVerizon zikhawuleze kwiidolophu ezininzi, ukuphuculwa komntu ophetheyo, ubukhulu becala, bekuncinci. Oko kwathethi, kubalulekile ukuba ugcine engqondweni ukuba isantya seVerizon ngokwembali besikhawuleza kakhulu xa kuthelekiswa neso sokhuphiswano, sishiya indawo encinci yokuphucula xa kuthelekiswa nezinye izinto eziphetheyo.
I-Verizon's 5G isantya sokukhuphela siphakamisa amandla anomdla we-mmWave ye-spectrum 5G: I-RootMetrics irekhode iziphumo ze-5G zeVerizon kwezisibhozo zeemarike ezingama-55 ezivavanywe kwi-1H 2020, kunye neVerizon's 5G isantya sokukhuphela ubuninzi sasimangalisa eBoise, eDetroit, eLos Angeles, nase IPhiladelphia. Isantya esiphezulu seVerizon kwi-5G sisusela kwi-472.3 Mbps eBoise ukuya kwi-676.4 Mbps kwi-LA. Ngelixa abathengi bengazukufumana esona santya siphezulu mihla le, banikezela ngenkangeleko ebalulekileyo kwimbonakalo ye-mmWave 5G yenethiwekhi.
Imizamo yokwandiswa kweVerizon 5G kufuneka ikhokelele kubukho obukhulu obuya phambili: Ngelixa iVerizon's mmWave 5G ibonakalise isantya esimangalisayo, ukubakho kwe-5G yenethiwekhi ngokubanzi kuthintelwe kuba imiqondiso ye-mmWave ayinakuhamba ukuya kuthi ga kwimiqondiso esezantsi- okanye embindini webhendi ye-5G esetyenziswa yenye abathwali. I-Verizon ijolise kwi-5G yayo kwiindawo ezithile apho amandla ongezelelweyo e-mmWave 5G anokunceda ukubonelela ngamava aphuculweyo, kodwa umphathi uthe izicwangciso zokwandisa i-mmWave 5G yakhe kwizixeko ezongezelelweyo ezingama-31 ngo-2020, ezinokuzisa ngokukhawuleza isantya se5G abantu abaninzi kwiindawo ezininzi.
I-Verizon ihambisa idatha 'egqwesileyo' kwaye ibize ukuthembeka kuzo zonke iidolophu ze-55 kwaye ifumana amabhaso okuNxibelelana ngakumbi kweRotScore amabhaso kunayo nayiphi na enye into ephetheyo. Ayisiyo kuphela inethiwekhi yeVerizon ekhawulezayo, ikwanokuthenjwa kakhulu. UVerizon ufumene amabhaso angama-54 okuQinisekiswa kweNgcaciso yeRootScore Awards ngaphandle kwamathuba angama-55, kwaye umntu ophetheyo ubhalisile idatha 'egqwesileyo' kwaye ebiza ukuthembeka kwizixeko ezingama-55 ezivavanywe kwi-1H 2020 ukuza kuthi ga ngoku. Ngelixa i-AT & T ikwazuzile ukuthembeka okuqinisekileyo kwibhodi yonke, i-Sprint kunye ne-T-Mobile ziye zangqineka zithembekile ngokufowuna, ngomnatha ngamnye obhalisa ukuthembeka kweefowuni ezivaliweyo kwiimarike ezingama-31 kwezingama-55. I-RootMetrics ithathela ingqalelo ukuthembeka kwedatha kwinqanaba lempumelelo le-97% okanye ngaphezulu yokufumana uqhagamshelo kunye / okanye ukuhlala unxibelelana nenethiwekhi njenge- 'Egqwesileyo,' ngelixa ibhlokiwe kwaye yehlise amazinga okusilela kweefowuni angaphantsi kwe-2% ikwajongwa njengokuGqwesileyo.
I-Verizon ifumana amabhaso e-RootScore kakhulu kunayo nayiphi na enye into ephetheyo: Ukusebenza okukhawulezayo nokuthembekileyo kweVerizon kwii-metros zase-US kuguqulelwe kwelona bhaso liphezulu kubo bonke abathwali abane nge-329 (kuma-385 ewonke amathuba amabhaso) kwi-1H 2020 ukuza kuthi ga ngoku. Eyona nto inomtsalane ngakumbi kukuba iVerizon ifumene ibhaso ngokusebenza kwayo yonke (zinto ezo zibangela iziphumo ezivela kwidatha, ukufowunelwa kunye nokuvavanywa kombhalo) kwii-52 kwizixeko ezingama-55. Olona khuphiswano lubalaseleyo kudidi yayiyi-AT & T, ngama-22 amabhaso anje.
ngoku uqhagamshelene nomthunywa
yintoni \_ t kwiJava
UApple ukhupha okokuqala ukwakhiwa kwe-iOS 15, ii-iPadOS 15 zokuphucula ii-betas kunye nokunye
Elona Dili liBalaseleyo ngeApple ngoSuku lweNkulumbuso ngo-2021
Eyona ifilimu kunye neglasi yesikrini esikhuselayo kwiGalaxy Note 9 yakho
IVirgin Mobile yaseMelika ukumilisela i4G yeWiMax Hotspot kunye neDongle ngoMeyi 31